रुकुममा पूर्व सहायक मन्त्री रोकासहित ४ जनामाथि कुटपिट, अब के हुन्छ ? – जलजला अनलाइन
रुकुममा पूर्व सहायक मन्त्री रोकासहित ४ जनामाथि कुटपिट, अब के हुन्छ ?
Posted on February 2, 2019 February 2, 2019 Author Comments Off on रुकुममा पूर्व सहायक मन्त्री रोकासहित ४ जनामाथि कुटपिट, अब के हुन्छ ?
माघ १९, रुकुम पूर्व । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व सहायक मन्त्री केशरमान रोका सहित ४ जनामाथि कुटपिट भएको छ ।
यो खबर हरि गौतमले कान्तिपुर डेली अनलाइनमा लेखेका छन् । रोका सहित नेकपाका नेता सतमान पुन मगर, पुनिराज घर्ती मगर र नेपाली कांग्रेसका नेता ध्रुवकुमार पुन मगरमाथि रुकुमकोटमा आन्दोलनकारीले कुटपिट गरेका हुन् ।
दाङ जिल्ला बन्द गर्ने नेकपाको चेतावनी (विज्ञप्तीसहित)
Posted on April 17, 2018 April 17, 2018 Author
बैशाख ४, दाङ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दाङका जिल्ला सदस्य विकास वली र जनक्रान्तिका घाइते योद्धा परिवारका केन्द्रीय सदस्य तथा पार्टीका जिल्ला सदस्य इश्वरी पाण्डेलाई प्रहरीले विना कारण गिरफ्तार गरेको भन्दै नेकपा दाङले घोर भत्र्सना गरेको छ । सोमबार तुलसीपुरबाट प्रहरीले विनाकारण दुईजना जिल्ला सदस्यहरुलाई गिरफ्तार गरेको थियो । विनाकारण पक्राउ गरेको भन्दै तत्काल रिहा […]
पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई ओलीले बालुवाटार किन बोलाए ?
वैशाख २५, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुसँग परामर्श गर्ने भएका छन् । नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा उनले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुसँग छलफल गर्न लागेका हुन् । छलफलका लागि पुर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा साढे १० बजे बोलाइएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । सरकारको नीति तथा […]
मङ्सिर २१, काठमाडौँ । निर्वाचनका कारण मुलुकको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिकतर्फका धैरै उडान कटौती भएका छन् । सरकारले निर्वाचनको समयमा विमान नउडाउन आग्रह गरेको र सर्वसाधारण यात्रु पनि मतदानमा सहभागी हुने हुँदा आन्तरिक उडान सीमित मात्रामा भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने नियमित तालिकाअनुसार भइरहेको विमानस्थलले जनाएको छ । निर्वाचनका बेला सवारीसाधन चलाउन नपाइने […]
प्रेमीसँग आपत्तिजनक अवस्थामा थिइन् आमा, छोरीले देखेपछि हत्या
निर्मलाको जस्तै भयो विराटनगरको बलात्कार घटना, अब के होला ?